महात्मा बुद्धले भने– यस्ता मानिस कहिल्यै गरीब हुँदैनन् – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/महात्मा बुद्धले भने– यस्ता मानिस कहिल्यै गरीब हुँदैनन्
एकपटक गौतम बुद्ध एक गाउँमा पुगेका थिए । मानिसहरु आफ्ना समस्या लिएर बुद्ध भएको ठाउँमा पुग्थे र समस्याको समाधान भएपछि खुुसी हुँदै फर्किन्थे । त्यही गाउँको सडकको किनारामा एक जना माग्ने बस्ने गरेको थियो ।
मानिसहरु बुद्धकोमा गएको उसले ध्यान दिएर हेरिरहेको थियो । उसलाई अचम्म लागिरहेको थियो कि बुद्ध कहाँ जाँदा मानिसहरुको अनुहार निकै दुखी खालको हुन्थ्यो तर फर्किएर आउँदा हास्दै आउँथे ।
त्यसपछि उसले म पनि किन नजाने त भन्ने सोच्यो र एक दिन बुद्ध भएको स्थानमा गयो ।
मानिसहरु लाइनमा बसेका थिए । बुद्धसँग आफ्ना समस्या सुनाउँथे । जवाफ पाएपछि खुसी भएर फर्कन्थे ।
जब उसको पालो आयो त्यसपछि उसले बुद्धलाई भन्यो,‘भगवान ! यो गाउँमा सबै सुखी र सम्पन्न छन्, म मात्र किन गरीब ?’ उसको प्रश्न सुनेर बुद्धले मुस्कुराउँदै भने,‘तिमी गरीब र निर्धन यसकारण भयौं कि तिमीले आजसम्म कसैलाई केही दिएका छैनौं ।’ बुद्धका कुरा सुनेर माग्ने छक्क पर्‍यो र सोध्यो,‘भगवान! म सँग अरुलाई दिन छ नै के र ? मेरो दैनिकी चलाउन मुस्किल छ । म अरुको घरघरमा गएर मागेर गुजारा चलाइरहेको छु ।’
शान्त मुद्रामा बुद्धले भने,‘तिमी अज्ञानी छौं । अरुलाई बाँड्नका लागि भगवानले तिमीलाई यति धेरै दिएका छन् तिमीलाई थाहा छैन ? तिमीले थाहा पाउने छौं कि अरुका लागि दिनका लागि भगवानले दिएको कुरा सजिलै तिमी दिन सक्छौं ।’ बुद्धले अगाडि भने,‘तिमीले मानिसमा आशाको सञ्चार गराउन सक्छौं । मुखबाट दुईवटा भएपनि मिठा शब्द बोल्न सक्छौं । दुबै हातले मानिसको लागि सहयोग गर्न सक्छौं । जसलाई ईश्वरले यी तीन चीज दिएको हुन्छ त्यो मानिस कहिल्यै गरीब हुँदैन, निर्धन भएको विचार व्यक्तिको मनमा हुन्छ । यो त एक भ्रम हो । यसलाई हटाउ ।’
यो सुनेर माग्ने निकै खुसी भयो ।
४ बर्षकी सित्तल सिलौटो पिस्दै,सुत्केरी आमा बितेपछि भाई स्याहार्ने र घरको काम गर्छिन्,सहयोग दिदा मख्ख (हेर्नुहोस भिडियो)
मन्त्री बन्न नेकपाका सांसदले चढाए मन्दिरमा ११ वटा बोकाको बलि
नारायणहिटीमा हिटलरको कार प्रदर्शनमा राख्ने तयारी